မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 02/01/2014 - 03/01/2014
LG Wireless Audio System @ only S$250 (ကံကောင်းခြင်းတွေပေးမဲ့ LG Dual docking System)
I am Selling back my luckydraw prize LG Wireless dual docking System (Model no. CM3330W at only S$250.
My reason for selling this is because I have won Yamaha docking system last year. So this docking system is not needed. If I hadn’t won docking system last year, I wouldn’t sell this one. This one seems awesome as well. There arealot of fantastic feature I like. Below are brief features from LG website. Leave me Comment or email me @ mabaydar@gmail.com if you are interested to buy. Since this is Luckydraw prize, I believe this will sure bring you with good fortune and luck.
ဟောင်ကောင်က god of wealth ကြီးကိုတော့ အတော်လေးကို ပူဇော်သင့်နေပါပြီ… ဒီအလုပ်ဝင်ကတည်းက Lucky Draw မပေါက်တဲ့နှစ်မရှိပါဘူး… အဲဒိ နတ်ကို ကန်တော့ပြီးကတည်းကပါ… (နတ်ကိုးကွယ်မှုကို အယုံအကြည်သိပ်မရှိပေမဲ့… ကန်တော့လိုက်လို့လဲ ကိုယ့်အကျိုးယုတ်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကန်တော့ခဲ့တာပါ)… ဒါပေမဲ့ ၃နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ အစွမ်းက နည်းနည်းတော့ ပျယ်နေပြီထင်ပါတယ်… စစချင်း ကန်တော့ပြီး ၁ လအတွင်း ၄ဆုမြောက်ပေါက်တယ်… မနှစ်က ၁၃ ဆုမြောက် ပေါက်တယ်… ဒီနှစ်တော့ ၃၂ဆုမြောက်ပေါက်ပါတယ်… ဟောင်ကောင် နောက်တစ်ခေါက်လာနိုင်အောင် ဖန်တီးပေးရင်ဖြင့် Repulse Bay က God of wealth ကို လာပူဇော်ချင်ပါသေးတယ်…
ဒီနှစ်ပေါက်တဲ့ Docking system က Feature တွေလဲ အတော်လေးကောင်းပါတယ်… မနှစ်ကသာ တစ်ခုပေါက်မထားရင် ရောင်းဖြစ်မယ်တောင် မထင်ပါဘူး… ဒီတစ်ခေါက် ဒီဇိုင်းလေးကလဲ အတော်လှပါတယ်… အဖြူရောင် ပြားပြားလေးဆိုတော့ ဧည့်ခန်းမှာထားလိုက်ရင် အတော်လှမှာပါ… ဒါပေမဲ့ မဗေဒါက သီချင်းလဲ သိပ်နားထောင်တဲ့သူမဟုတ်တော့… ကိုယ်က သူများကိုနားဒုက္ခပေးမှာထက် သူများက ကိုယ့်ကိုနားဒုက္ခပေးဖို့က များပါတယ်… ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကို မဗေဒါဆီက ၀ယ်ယူသူတွေအတွက်လဲ ကံကောင်းခြင်းတွေပါ ကူးစက်သွားမှာ မလွဲဘူးလို့ မဗေဒါက ယုံကြည်ပါတယ်… အောက်က Feature လေးကတော့ LG website မှာ တင်ထားတဲ့ အဓိက Feature တွေပါ… Manual မှာဖတ်ကြည့်တော့ ဒိထက် သဘောကျတဲ့ Function တွေကို တွေ့ပါသေးတယ်…
Free from Wires! LG’s wireless active subwoofer allows you to enjoy superb sound quality with distinctive style in any location.
၀ါယာတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးမနေတော့ပါ! LG ရဲ့ wireless ကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Subwoofer တွေဟာ သင့်ကို အကောင်းဆုံး အသံအရည်အသွေးနဲ့ ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ ထူးခြားသိသာတဲ့ စတိုင်နဲ့ ခံစားခွင့်ပေးမှာပါ..
Take full control of your home audio withasingle app! Just download the LG Bluetooth remote app for your smartphone and enjoy full controllability. With NFC, it works even better than ever.
သင့်ရဲ့ smart Phone ထဲကို app လေးထည့်ထားရုံနဲ့ သင့်အိမ်က အသံစစ်စတန်ကို အပြည့်အ၀ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပြီလေ! LG Bluetooth remote app ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ… NFC စနစ်နဲ့မို့ ခါတိုင်းထက်တောင် ပိုကောင်းအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်.. (Manual ထဲမှာ ၁၀ မီတာအတွင်း Bluetooth မိတယ်လို့ဆိုပါတယ်)
Portable In connectivity က သင့်ရဲ့ တခြား MP3၊ လက်ပတော့ နဲ့ တခြား သီချင်းဖွင့်ကိရိယာတွေ ကနေတဆင့် LG audio systems ကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပြီး သီချင်းတွေကို ပျော်ပျော်ကြီးနားဆင်လို့ရပါတယ်တဲ့…
Other Technical Spec (ဒါကတော့ နည်းပညဆိုင်ရာ Specification ပါ)
STREAMING MICRO AUDIO
Portable in / X
Source info (http://www.lg.com/sg/home-theater-systems/lg-CM3330W/technical-specifications)
ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ တခြား Function တွေ
Bluetooth နဲ့ သီချင်းဖွင့်လို့ရခြင်း
App နဲ့ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး လုပ်လို့ရသလို Bluetooth နဲ့လဲ သီချင်းလှမ်းဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်… ဥပမာ၊ ဖုန်းထဲက သီချင်းကို Bluetooth ဖွင့်ပြီး ၀ါယာနဲ့ဆက်မထားပဲ ဒီ audio system ကနေ ဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်… ၁၀ မီတာအတွင်းရတယ်ဆိုပါတယ်…
Recording in USB
USB ထဲကို CD ထဲက သီချင်းတွေကို Record လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့… တစ်ပုဒ်ချင်းစီ record လုပ်ချင်လဲရသလို… CD တစ်ခုလုံး USB ထဲ ကူးယူလိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့… တစ်ပုဒ်ချင်းစီ record လုပ်ပြီး USB ထဲထည့်နေတဲ့အချိန်မှာလဲ အဲဒိသီချင်းကို နားထောင်နေလို့ရပါတယ်တဲ့… သီချင်းလဲ ပြီး USB recording လဲပြီးဆိုတာမျိုးထင်တယ်…
CD နဲ့ USB ၂ခုကို တပ်ထားပြီး စက်ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ အစဉ်လိုက်လာအောင် ပရိုဂရမ်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်တဲ့… ဒီတော့ မတူတဲ့ မီဒီယာ ၂ခုက သီချင်းတွေကို ဟိုဘက် ဒီဘက်ရောပြီး list လုပ်ပြီး နားထောင်လို့ရတယ် …
ကျန်တဲ့ သေးသေးဖွဲဖွဲ Function တွေဖြစ်တဲ့ နာရီသံပတ်လို့ သုံးလို့ရတာ… ရေဒီယိုနားထောင်လို့ရတာ စသည်ဖြင့် တော်တော်လေးကို စုံပါတယ်…
ဒီနေရာလေးမှာ Manual အပြည့်အစုံဖတ်လို့ရပါတယ်…
I haven't even open the packing... အသစ်ကြီးကို second hand ဈေး အတိုင်းရောင်းမယ်...
ကဲ… စိတ်ဝင်စားတယ် ၀ယ်ချင်တယ်ဆို ဆက်သွယ်လိုက်နော်… စကာင်္ပူမြို့တွင်းပဲရောင်းမှာပါ…
Posted by mabaydar at 5:41 PM2comments :
Posted by mabaydar at 2:12 PM 10 comments :
Posted by mabaydar at 5:48 PM 16 comments :